Marx, Lenin iyo Ho Chi Minh xaflada arooska Engels ee India
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Marx, Lenin iyo Ho Chi Minh xaflada arooska Engels ee India
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Wararka Fashion • Wararka Hindiya • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Marx, Lenin iyo Ho Chi Minh xaflada arooska Engels ee India.
Xisbiga shuuciga ee deegaanka ayaa 60-kii sano ee lasoo dhaafay hoggaanka u hayay gobolka Kerala ee koonfur-galbeed ee Hindiya, welina aad ayey caan ugu yihiin cod-bixiyayaasha.
Magaalada Athirappilly maalintii Axadda ayuu aroosku, Friedrich Engels, ku xidhay aroosadda, Bismitha.
Waxaa sidoo kale joogay Engels walaalkii Lenin, iyo sidoo kale saaxiibada arooska, Marx iyo Ho Chi Minh.
Dhammaan afarta nin waxay ka tirsan yihiin xisbiga shuuciga ee Hindiya.
Gobolka Kerala ee koonfur-galbeed ee Hindiya, xisbiga shuuciga maxalliga ah ayaa hoggaanka haya inta badan 60-kii sano ee la soo dhaafay, welina aad ayuu caan ugu yahay cod-bixiyayaasha.
Aad loo jecel yahay xaqiiqda, in waalidiinta ku nool gobolka ay inta badan u magacaabaan caruurtooda ka dib tirooyinka caanka ah ee dhaqdhaqaaqa shuuciga.
Caruuska, Friedrich Engels, ayaa guursaday caruuska, Bismitha. Waxaa sidoo kale joogay Engels walaalkii Lenin, iyo sidoo kale saaxiibada arooska, Marx iyo Ho Chi Minh.
Marka, markii Marx, Lenin, iyo Ho Chi Minh ay isugu yimaadeen aroos Kerala, iyadoo Friedrich Engels uu ku sii socday dariiqa, wax shaqo ah kuma lahayn safarka waqtiga.
Magaalada Athirappilly, ninka arooska ah, Friedrich Engels, oo magac u leh qarnigii 19aad ee faylasuuf Jarmal ah oo ka caawiyay uureysiga Marxism, ayaa ku xidhay arooska, Bismitha. Waxa kale oo ka soo qayb galay Engels walaalkii Lenin, oo loogu magac daray ninkii ka danbeeyay Kacaankii Ruushka 1917, iyo sidoo kale saaxiibadii arooska, Marx iyo Ho Chi Minh, kuwaas oo sita magacyada aabbihii aasaasay Marxism iyo hoggaamiyihii kacaanka Vietnam siday u kala horreeyaan.
Dhammaan afarta nin waxay ka tirsan yihiin xisbiga shuuciga ee Hindiya. Dhacdo ahaan, Marx hadda waxa uu ka shaqaynayaa oo ku nool yahay hanti-dhowreedka Dubai, balse dib ayuu u duulay si uu u arko saaxiibkii oo nidarka arooska is dhaafsanaya iyo gacalisadiisii, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha.
Xaflad kale oo meher oo bishii June ka dhacday gobolka Tamil Nadu, waxa uu arkay Hantiwadaaga oo ku hor guursanaya walaalihiis, Shuuciyada iyo Leninism-ka, iyo sidoo kale wiil uu adeer u yahay, Marxism.